Midowga Yurub oo ku kala qaybsan arrinta muhaajiriinta - BBC News Somali
Image caption Talyaaniga ayaa ah marinka ugu horreeya ee ay soo caga dhigtaan doonyaha muhaajiriinta sida ee ka yimaada Liibiya
Shir madaxeedka Midowga Yurub ee ballaaran ayaa dhammaan kara ayadoo aan wax natiijo ah laga gaarin sidii xal loogu heli lahaa khilaafka la xiriira sidii laga yeeli lahaa soogalootiga sharci darrada ah.
Talyaaniga oo ah halka ay kasoo dhul bilaabaan kumanaan muhaajiriin ah, oo badan koodu ka yimid Afrika - ayaa sheegaya in uu adeegsanayo codka diidmada qayaxan oo kadhan ah warmurtiyeed kasta oo shirkaas kasoo baxa haddii aan mushkiladdaan xal loo helin.
Hoggaamiye-yaasha ayaa ka doodaya xudunta uu khilaafkani ku salaysan yahay xilliga cashada.
Talyaaniga ayaa ka doonaya dalalka kale in ay culayska la qaybsadaan. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in la joogo xilligii Midowga Yurub ay arrintan go'aan adag ka gaari lahaayeen.
Mrs Merkel ayaa waxaa saaran cadaadis ah in ay la timaaddo heshiis looga hortago soogalootiga cusub.
Muhaajiriinta soo qulqulaya ayaa sidoo kale waxaa kujira qaxootiga kasoo cararaya dagaalka Suuriya iyo loollanno kale, kuwaas oo raadinaya magangalyo degdeg ah.
Midowga Yurub oo yaraynaya isticmaalka tamarta 30%
Dhibaatada ayaa aad uga ballaaran sidii hore ee sanadkii 2015-kii, markaas oo kumanaan muhaajiriin ah ay dhanka badda kasoo gali jireen jasiiradaha dalka Giriigga.
Golaha midowga Yurub - hoggaanka Midowga Yurub ee dhanka Istiraatiijiyadda - ayaa sheegaya in tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah usoo galaysa Midowga Yurub ay hoos u dhacday 96% tan iyo sanadkii 2015-tii oo ay tirada muhaajiriintu gaartay halkii ugu saraysay.